UKhuzani uthi yobe kubalandeli bakhe | News24
UKhuzani uthi yobe kubalandeli bakhe
Durban - Sizimisele ngokuxolisa kubalandeli baso isilomo sikamasikandi ngemuva kokuba sehlulekile ukufika emcimbini obungempelasonto edlule oGwini Sports and Leisure, ngaseMargate, ogwini oluseningizimu yeKwaZulu-Natal.
UKhuzani "Indamlenze" Mpungose bekufanele anandise emcimbini, Isiqhatha Izinkunzi Maskandi Festival, kodwa wangalubhada.
Baphoxekile abalandeli bakhe abebekhona kulo mcimbi, abebedlubhe imibala e-blue njengenjwayelo, belinde isilomo sabo kodwa singabonwa.
USifiso Ndimande, ongomunye wabahleli bomcimbi, uvumile kwiLANGA LangeSonto ukuthi uKhuzani akafikanga emcimbini.
OLUNYE UDABA:Kusuke isidumo kwaqhuma nempama kowomasikandi ngenxa ka'Saaah'
"Ufonile sekuntambama samtshela ukuthi akangabe esazihlupha ngoba umcimbi usuphelile. Kulo mcimbi inkunzi zidlale kusakhanya ngesizathu sokuthi bezijahe komunye umcimbi iMvunge Maskandi Festival obukwaDukuza eStanger ngosuku olufanayo," kusho uSofiso.
Ukuqinisekisile futhi uSifiso ukuthi uKhuzani uyibuyisele emuva yonke imali abesekhokhelwe yona yokucula kulo mcimbi kodwa wale waphetha ukudalula isamba, wathi akafuni ukona ubudlelwane anabo nenkampani yeZingane zoMa asebenza ngaphansi kwayo uKhuzani.
NoKhuzani ekhuluma naleli phephandaba uvumile ukuthi impela bekumele abe kulo mcimbi kdwa ngenxa yokumpintsheka wagcina engasakwazanga ukya.
Uthi ngaloluya suku bekunemi-cimbi emithathu obekumele anandise kuyo obuseGreytown, obuseStanger nalowo agcine engasaphumelelanga kuwo.
"Ngithe ngiyafona abahleli bomcimbi bangibikela ukuthi usuphelile umcimbi ngase ngibabuyisela imali," kusho yena.
UKhuzani uthe uhlela ukuhlangana nabalandeli bakhe, axolise kahle ngokungaphumeleli kwakhe emcimbini.